Lewandowski oo si adag uga jawaabay hadaladii Messi ee ku saabsanaa abaal-marinta Ballon d’Or – Gool FM
(Munich) 07 Dis 2021. Weeraryahanka kooxda Bayern Munich ee Robert Lewandowski ayaa dhaliyay muran baahsan qaabkii uu uga jawaabay erayadii xiddiga naadiga Paris Saint-Germain ee Lionel Messi, intii lagu guda jiray xafladda abaal-marinta Ballon d’Or ee 2021.
Lionel Messi ayaa caawa ku guuleystay abaal-marintan Ballon d’Or markiisii toddobaad xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, waxaana uu ku garaacay xiddigaha kala ah Robert Lewandowski iyo Jorginho.
Wargeyka AS ee dalka Spain ayaa daabacay hadalada Robert Lewandowski kaddib markii uu u jawaabay Lionel Messi, wuxuuna yiri:
“Kuma qanacsani fikradda ku guuleysiga Ballon d’Or 2020, waxaa laga yaabaa inaan jeclaan lahaa fikradda haddii ay ahaan lahayd hadal daacad ah oo asluub ​​leh oo ka soo baxay ciyaaryahan weyn sida Lionel Messi, oo aan ahayn kaliya hadal bilaa micno ah.”
Labo fasiraad ayaa laga bixiyay hadalka Lewandowski, iyadoo dadka qaar ay u arkaan inuu damacsanaa inuu su’aal ka keeno daacadnimada erayadii Messi ee xafladdii Ballon d’Or ee 2021.
Halka qaar kalena ay aaminsan yihiin inuu ixtiraamayo hadalka xiddiga reer Argentina, laakiin wuxuu rumeysan yahay in abaal-marinta hadda aysan wax macno ah lahayn.
Xiddiga Bayern Munich ayaa sidoo kale qirtay inuu niyad-jabay kaddib markii uu kaga guuleystay Lionel Messi abaal-marinta Ballon d’Or ee 2021, wuxuuna yiri:
“Waxaan dareemay murugo, lama dafiri karo.”
“Waxaan dareemay caawin la’aan, sababtoo ah waxaan ku dhawaaday inaan guuleysto, waxaana la tartamayaa Messi, dabcan waan ixtiraamayaa qaab ciyaareedkiisa iyo waxa uu ku guuleystay. In aan la tartamo isaga waxa ay i tusinaysaa heerka aan joogo, laakiin run ahaantii waxa aan dareemay murugo.”
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha RB Leipzig iyo Man City ee tartanka Champions League oo la shaaciyey